Cusboonaysiinta LMDE Xidhmada 4 iyo beddelka Gnome 2 | Laga soo bilaabo Linux
Cusboonaysiinta LMDE Xidhmada 4 iyo beddelka Gnome 2
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, Qaybinta, GNU / Linux
Cinwaankan hoostiisa barta LinuxMint, Clem ayaa soo daabacday maqaal sharxaya in aan ku kulmi doonno muddadii aan sugeynay Cusboonaysiinta 4aad de LMDE.
Cusbooneysiintan, oo ku jirta marxaladda tijaabada iyo diyaarinta, waxaa ku jira isbedelada soo socda:
MATE 1.2 (oo leh mintMenu iyo mintDesktop oo si buuxda loogu duubay MATE)
Loogu talagalay isticmaaleyaasha doonaya inay xafidaan xirmooyinka ka Cusboonaysiinta Xidhmada 3, yacni, hayso Gnome 2, waad isticmaali kartaa keydadkaas:
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo aan weli la ogeyn midka caan ka noqon doona Qoraxda y MATE, Doorashadan labaad waxay u noqon kartaa beddel fiican oo loogu talagalay dadka isticmaala Gnome 2, inkasta oo la arko sida Gnome Fallback u ekaan karto, aniga ahaan MATE waa talaabo hore.
Sida dheeraad ah, Clem wuxuu noo sheegayaa in ISO de LMDE la socota Cusboonaysiinta Xidhmada 4, sidoo kale wuxuu tilmaamayaa taas MATE y Qoraxda waxaa laga yaabaa inaysan noqonin desktops-yada caadiga ah, laakiin si kastaba ha noqotee waa lagu dari doonaa, oo labaduba waxay si buuxda u wada shaqeyn doonaan Iyaguna way cusbooneysiinayaan Firefox y Thunderbird in version 11.0. Marka waad garanaysaan niman yahow, war ayaan ka helaynaa tan goor dhow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Cusboonaysiinta LMDE Xidhmada 4 iyo beddelka Gnome 2
59 faallooyin, ka tag taada
Waxaan cusbooneysiiyay lmde-geyga si aan u xareeyo 4 dhowr maalmood ka hor, 700 iyo megabyte badan oo cusbooneysiin ah iyo in ka badan nus saac oo rakibid ah waxay keeneen nidaam gaabis ah, bilowga iyo hawlgallada guud, ma aqaano inay khaladkaygu ahaa ama waxa dhacay, laakiin markaan gudbo laga soo bilaabo gnome2 ilaa 3 isbedelku wuxuu ahaa mid xagjir ah, oo ka xun, sidaa darteed waxaa laygu qasbay inaan rakibo qorfe aan sidaa u sii xumaanaynin, laakiin runta, isbeddelka wax badan baa lumay, ma laha xulashooyin isku mid ah oo isku mid ah, iyo waxyaabo kale , Marka waxaan u maleynayaa inaan wax ka beddeli doono 'distro', su'aal furan, sidee chakra ugu socotaa qaybteeda ugu dambeysay? Waan ka helay kde oo si toos ah ayey ugu socotaa sida xabadda oo kale, rakibtay ma ogi, waxaan sugayaa jawaabahaaga, salaan.
ps: aad u fiican bartaada, mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aan soo arkay, hadda iyo xog muhiim u ah isticmaaleyaasha Linux, salaan
Chakra waa ikhtiyaar aad u wanaagsan.
Iyo waxqabadka guud?, Dhibaatooyin ayaan kala kulmi doonaa tusaale ahaan markaan rakibayo Firefox maadaama ay tahay xirmo, waxaan dhihi, qaabeynta lagu keydiyo .home waa la keydin doonaa, su'aal kale, Waan rakibi karaa synapse wayna shaqeysaa, kuma arkin iyaga maareeyaha xirmooyinka ama qeybta rakibaya barnaamijka ee qaabka tooska ah
Waxaan adeegsaday Chakra muddo 6 bilood ah, sanadkii hore, runtiina aad ayaan ugu faraxsanahay. Waad rakibi kartaa Firefox dhibaato la'aan, xirmooyinka, kuwaas oo lagu duubay codsiyo GTK ah "oo aan ku nijaasaynin nidaamka ku tiirsanaantooda," iyo sidoo kale bakhaarrada bulshada, CCRs. Laga soo bilaabo synapse wax fikrad ah maleh, laakiin Opera wuxuu ku yimaadaa meelaha rasmiga ah. Haddii aad jeceshahay KDE, horay u soco.
Waan ilaaway, qaabeynta si caadi ah ayaa loo keydiyaa, ha xirmo ama ha xirnaado.
waad ku mahadsantahay faallooyinka, igu farax oo aniga kaliya ayaan rakibay oo aan habeeyay chakra linux, si aad u wanaagsan ayey u socotaa, dhakhso badan oo aan dhibaato weyn lahayn
Waad ku mahadsan tahay sebas oo soo dhowow:
Waxaan u maleynayaa in kiiskan ay fiicnaan laheyd in la sugo .isos lagu sii daayo Cusboonaysiinta Xidhmada 4 si looga fogaado cusboonaysiintaan waaweyn.
Waad ku mahadsantahay waxaad ka tiri baloog, waxaan isku dayeynaa inaan ka farxino qof walba 🙂
PS: Markaad dhadhamiso KDE, ma rabi doontid inaad wax kale tijaabisid 😉
Yuusuf Gari dijo
hehehehe Mr. Gaara waa sax, oo ku saabsan KDE !! war weyn oo ah in mid ka mid ah waxyaabaha aan jeclahay (LMDE) uu la yimaado KDE. In kastoo qorfe runtii mustaqbal yeelan doono.
Jawab Joseph Gari
qorfe waxay lahaan doontaa mustaqbal wanaagsan .. waxaana rajeyneynaa inay hoos u dhigeyso suuqa qaladkaas dabiiciga ah ee loo yaqaan "Midnimada"
waa sidaas .. !! Kama sii wadin adeegsiga KDE maxaa yeelay hoonbarfin ma muujiso sawir kooban oo fiidiyowyada ah sida nautilus ay muujiso taasi waa waxa kaliya ee aanan ka helin KDE waxa kaliya ee ahahaha
Waad ku dhaqaajin kartaa thumbnails-ka fiidiyowga ee loo yaqaan 'Dolphin' adigoo rakibaya kdemultimedia-ffmpegthumbs, tusaale ahaan, laakiin runtu waxay tahay in hadda ay tahay inay ahaato mid caadi ah.
wow ma aanan ogeyn in O_O… ay jirto wado lagu sameeyo sida Gnome2 oo kale feylasha maqalka? taasi waa, dulsaarida tilmaamaha / tilmaamaha feyl maqal ah, wuxuu bilaabayaa ciyaar? mahadsanid 🙂
KZKG ^ Gaara, inta aan ogahay, maya, in kastoo aanan sameyn intii karaankeyga ah si aan u helo macluumaad ku saabsan. Taasina waa tan Dolphin, haddii aan dhaqaajino guddiga macluumaadka, waxaan horay u arki karnaa feylasha multimedia, in kasta oo aysan isku mid ahayn.
mmm haa waad saxantahay, gudigaas waa la qabtay, laakiin shaashadaydu waa kaliya 14 inji ... oo leh 1024 × 768 oo qarash gareeysa gudigaas maadaama ay dhib tahay 🙁
Chakra way fiicantahay waxaan ka imid Kubuntu waxaanan dareemayaa gurigeyga, marka la eego waxqabadka waa wax aad u wanaagsan in la rakibo saldhig halkaasna laga bilaabo wax walba oo aad jeceshahay. Marka laga hadlayo Firefox waad ka rakibi kartaa Bushqadda, waa Firefox aan aad isugu dhafaneyn, waxay leedahay ikhtiyaar kale oo ah Firefox-qt oo isku dhafan laakiin kaliya fiiri isaga oo xun peta x_X.
Midda kale waa in laga rakibo ccr-ka Firefox-kde-opensuse wuxuu si fiican u dhexeeyaa ma aha oo kaliya muuqaal ahaan haddii uusan ku jirin wax walba, laakiin dhibaatadu waxay tahay inay qasab tahay inay uruuriso oo ay qanciso gkt + ku tiirsanaan badan iyo inay qaadato waqti dheer in la soo uruuriyo> way fiican tahay nnka dam iyo in ka badan hadaan rakibo ogsijiin KDE. Nidaamkan ayaa lagu soo celiyaa nooc kasta oo cusub x_X
Hal su'aal, hadda waxaan haystaa Xubuntu oo ku rakibtay dhabta, LMDE oo leh Xfce ayaa loo tixgelin karaa inay tahay khafiif iyo deg deg deg deg ah?
Ku jawaab elbuengeorge
Khafiif hubaal. Si dhakhso leh I ..Waxaan u socdaa Riwaayadda weyn waxaanan haystaa Birta SRWare oo leh 6 tab, Firefox oo leh 3, terminal, bisha iyo gedit.
Waan kuu sheegayaa ... Waxaan haystaa KDE 4.7.4 oo leh Chromium leh 2 tab, Firefox 11 oo leh 1 tab iyo Opera 11.61 oo leh 5 tab, oo lagu daray server webka (Apache + PHP5 + MySQL) oo lagu daray sidoo kale Pidgin, KMail, Dolphin (faylka fayraska) fur iyo Kate (tifaftiraha qoraalka), sidoo kale fur Yakuake (terminal), Klipper, Bluetooth, iyo waxyaabo kale, waxayna kaliya cuntaa 750MB oo RAM ah O_o iyo Mint kaaga ayaa ku baaba'a kaliya Xfce iyo qaar ka mid ah barnaamijyada 1GB? ... fuck, go _______ Mint in, maalin kasta waxaan aad ugu qanacsanahay in ay tahay wax yar ka badan ...
Oo mishiinkaagu waa imisa? Miinadaydu waa 4GB.
Sidoo kale ma isticmaalo wax "yareyn kara" isticmaalka wanka
Kaliya 2GB oo RAM ah 🙂
PS: Kaliya waxaan fasaxay Nepomuk… maxaa yeelay saameynta, daahfurnaanta, animations-ka iyo Akonadi ayaa shaqeynaya.
KZKG ^ Gaara
Sidee noqon kartaa ???
Oo waxaan isku dayay inaan rakibo KDE in kabadan kun jeer (Qeybinta kaladuwan), laakiin had iyo jeer waa mid aad u culus.
Waxaan haystaa 3 Ram 2 Core PC, kaarka fiidiyowga 'Intel' (midka ugu adag)
Hadaad isiiso casharka KDE.
Waa hagaag, laba waxyaalood:
1- Intel maahan gabi ahaanba kaararka inta badan la duubay, waa wax iska soo horjeedda.
2- Labada KZKG ^ Gaara, iyo aniga (waqti ka hor) waxaan ku rakibnay KDE Debian soo socda casharkaan.
faahfaahsan mid runti made
Miyaad ku dhejisaa distro 32 jajab ama 64?
Waxaan kuu sheegayaa, KDE waa sida AMD ... waxay leedahay khuraafaad badan oo ku wareegsan haha ​​ha
Hahahaha Elav, taas uma aan jeedin. Haddii kale, waxaan haystaa mid ka mid ah kuwa ugu nacasnimada badan. Ma ahan in intel la jeexjeexay.
Waxaan ku rakibay 32 qaybood KDE (OpenSuse, Fedora, Kubuntu, Arch, Debian, iwm)
Waan joojinayaa saameynta, Nepomuk. Dib u fur mashiinka.
Waxa ugu horreeya ee aan ogaado:
Desktop-ka wuu fariisanayaa qiyaastii 10-20 sekan ka dibna waan sii wadi karaa.
Isticmaalka kumbuyuutarradayda 'CPUs' waa 50% ilaa 70% oo aan waxna dhaqaajin.
Qeybinta kale isticmaalku waa min 20% ilaa 40% laakiin marka dukumiintiyada laga wareejinayo DD-ga la saari karo loona wareejinaayo pc-ga, isticmaalku wuxuu kor ugu kacayaa 100% labada CPU ama marka la furayo biraawsarka internetka.
Taas ugama jeedin. Haddii kale, waxaan haystaa mid ka mid ah kuwa ugu nacasnimada badan. Ma ahan in intel la jeexjeexay.
OL LOL !!! HAHAHA !!! sidaan ugu qoslay HAHAHAHAas !!!!!
wacdaro .. maahan haddii isticmaalka hooseeya uu sabab u yahay debian-ka xoogga leh ama in qalabkaaga uu ku duceeyay ilaahyada ahahaha xD laakiin mar aan isku dayay inaan KDE ku tijaabiyo Kubuntu iyo isticmaalka xusuusta wuxuu ahaa cai 2 gb oo leh jdowloader + google oo keliya chrome leh 5 tabs furan iyo vlc.
HAHAHA maya maahan waxa dhaca, iyadoo ArchLinux isla waxbaa igu dhacay (si daacad ah waxaan u arkay KDE Arch ka dhaqso badan, laakiin halkaas waxaan ku isticmaalay KDE 4.8.1 iyo hada Debian kaliya 4.7.4, hubaal waa taas).
- Opera (6 tabs)
- Firefox (1 tab)
- Apache + MySQL + PHP
- Jadwalka roobka2
- Saamaynta hufnaanta + Sawirada
Wadarta isticmaalka: 571MB oo RAM ah ayaa la cunay iyo SWAP oo 5MB ah ama ka yar.
markaa waa inay noqotaa nooca cusub ee KDE oo ah 4.8 in isticmaalka la hagaajiyay 🙂
sidaas ayaan u maleynayaa
Hagaag hadda waxaan rakibay LMDE xalay, hadda waa la cusbooneysiiyay, waxaan rajeynayaa in wax walba ay yihiin sidii la filayay.
Ilaa iyo hada waafiican tahay, waxaan ubaahanahay inaan rakibo fiidiyowga iyo darawalada dhawaaqa ... iwm ... Ma lihi fikrad xun oo ah sida loo sameeyo, laakiin waan arki doonaa waxaan sameeyo, waxaan haystaa ATI 5770, haddii aad i caawinaysid, fadlan ha dhigin iskuxiraha soo dejiso, horey ayaan u aqaan waxa la sameeyo, waxa aan rabo inaan ogaado waa habka rakibaadda.
Na sii wax soo saar tan:
sudo apt-get search ati
leh "Cusboonaysiinta Xidhmada 4" waxay i xasuusineysaa Windows "Adeegyada Xirmooyinka" xDDD
Waa sababta oo ah waa isku mid. Waxay la mid tahay iyadoo la leeyahay maareeyaha cusboonaysiinta ayaa xusuusanaya Windows Update.
inaad sugto xasiloonida UP4 inay soo baxdo.
Waxaan talaabo talaabo u qaadaa (inaan u ordayo isbitaalka in odaygeygu aad iyo aad u jiran yahay)
Waxyaabaha aan ogaaday, waana sababta aan u adeegsanayo Xubuntu, waa kadib markaan dhammeeyo rakibidda barnaamijyada aan aadka u adeegsado oo aan dib ugu bilaabo kaliya inaan wax walba hagaajiyo, wifi wuu tagaa. Kaadhka dhabku waa warbaahin weyn, badhanka ayaa daaran, dhammaan wadayaasha baabuurta oo horeba loo rakibay iyo sida ku xusan shaqadan, laakiin ma xirmayo (iyo dib u bilaabista ama dib-u-cusbooneysiinta wadayaasha, marka laga reebo wifi-ka oo iga dhammaanaya, waan hadhay Ethernet la'aan) Dhibaatadani waxay igu dhacdaa labadaba LMDE distros (taas oo ah, gnome iyo Xfce) oo xitaa ma aqaano sida loo helo dhibaatadayda.
Ma iloobo ragga kale ... runtii waxaan rabaa inaan la shaqeeyo, laakiin kuma aanan xisaabtamin wax kasta oo hareerahayga ka dhacaya. Cadaadiska waa sida pffft, xitaa ma sawiri karo. Isla marka aan waxyar ka xorowdo oo aan nasto, waxbaa ku dhaca iyaga, maxaa yeelay ma haysto qalabka iskaanka oo la heli karo runtiina, ma aanan awoodin inaan abuuro wax ka mid ah naqshadeynta tartanka tartanka. Kun raali gelin, maahan inaanan rabin ... Laakiin markaa arrimuhu way dhacaan.
Waa sababaha ugu waaweyn ee si fiican loo fahmay.
Waa war wanaagsan !!
Ma jiraa qof og taariikhda la sii deynayo ee LMDE ISOs oo wata Cusboonaysiinta Xidhmada 4?
Waad salaaman tihiin saaxiibayaal su'aal ayaan ka qabaa LMDE, waan rakibay oo waan cusbooneysiiyay laakiin Gnome 3 oo waxaan doonayay inaan ogaado haddii ay wali ogaato hal xudun, maadaama Gnome 2 iyo Xfce kaliya lagu arkay hal processor.
Ku jawaab Mysta
Taasi kuma xirna jawiga desktop-ka, laakiin waxay ku xiran tahay xabadka aad isticmaaleyso. Waa inaad rakibtaa midka la yiraahdo Linux-sawir-3.2.0-2-686-pae. Waxaad fureysaa terminal waxaadna dhigeysaa:
sudo aptitude install linux-image-3.2.0-2-686-pae -y
Grub-ka waxaan ku leeyahay:
LMDE, oo leh 3.2.0-2-486
LMDE, oo leh 3.2.0-2-486 (qaabka soo kabashada)
LMDE, oo leh 2.39.0.-2-486
LMDE, oo leh 2.39.0.-2-486 (qaabka soo kabashada)
iyo Arch oo leh Dib u dhaciisa
Marka kani ma aha haddii pae, waxaan u maleynayaa inaad ku dhejin karto pae 686 Synaptis.
Markaad rakibayso markii ugu horreysay waxaa laga yaabaa in burka lagu rakibay qayb ahaan iyo markii loo cusbooneysiiyo Gnome 3 ku rakib Grub qayb kale.
Hagaag haa, waad ka rakibi kartaa Cilmi-baarista. Waxba kamaan fahmin GRUB: S
Waxa dhacaya ayaa ah in ciribtirka waxaan haystaa 4taan ikhtiyaar oo aan ku xusho 3.2 kenel iyo 2.39 ma garanayo sababta
Sababtoo ah wali waxaad heysataa firida ka timid Update Pack 2 Pack
Laakiin sababta? haddii ilaha aan ku qoranyahay.waxaan u hayaa sidan:
deb http://packages.linuxmint.com/ debian -ka ugu weyn ee laga soo dejiyo
deb http://debian.linuxmint.com/latest Tijaabada ugu weyn ee tijaabada ah waa bilaash
deb http://debian.linuxmint.com/latest/security Tijaabinta / cusbooneysiinta ugu weyn waxay gacan ka geysaneysaa bilaash la'aan
deb http://debian.linuxmint.com/latest/multimedia tijaabinta ugu weyn ee aan lacag la'aanta ahayn
Waxaan dalbaday sudo apt-get update iyo sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade waana isla raacaysaa.
Hagaag rakibi Linux-image-3.2.0-2-686-pae -yy hada waxaan haystaa marka laga reebo 4-ta ikhtiyaar ee hore waxaan haystaa 2 galitaan oo dheeri ah oo leh kuwa pae 686.
Raali noqo jaahilnimadayda laakiin ma fahmin waxaan sameeyo.
Waxa kaliya ee GRUB sameeyo (markii ugu horreysay) ayaa u oggolaanaya waxa Kernel ama Operating System-ka soo galaan. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah helitaanka midka koowaad ee kor ku xusan, oo ay tahay inuu noqdo Linux-image-3.2.0-2-686-pae.
Haa, laakiin afarta qoraal ee kale ee aan iyaga la sameeyo, daqiiqad gudaheed waxaan u maleeyay in gelitaanka kale aan ku gali karo Mate ama Cinnamon.
Xaqiiqdii, waxaan ku dhawaaday inaan rakibo MATE kalfadhiga Grub 2.39, laakiin marka hore waxaan rabay inaan la tashado, maadaama anigoo horay u deg degay aan uga tagey musiibooyinka nidaamka.
Haddii waxyaabahan ay soo bandhigayaan aysan fulin wax hawl ah, mala tirtiri karaa?
Waxay umuuqataa wax sidan ah:
LMDE, oo leh 3.2.0-2-686
LMDE, oo leh 3.2.0-2-686 (qaabka soo kabashada)
Ma aanan dareemin, laakiin KZKG ^ Gaara ayaa isticmaalayay debian muddo dheer, miyaanu ku laaban doonin archlinux dambe?
HAHAHA uch… taas oo dhaawacday… LOL !!!
Waxba, in Arch ka dib markii 3dii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay uusan kicin, markii aan cusbooneysiiyay kernel nidaamku ma uusan bilaaban ... waxaanan lumiyay waqti badan oo dib-u-dhigis ah, hadda Debian haa, waxaan haystaa xirmooyin duug ah oo aad u weyn, laakiin ugu yaraan waxaan xoogga saari karaa inaan shaqeeyo oo aanan waqti galin waxyaabaha OS.
Laakiin uguyaraan waxaan diirada saari karaa shaqaynta iyo inaanan waqti ku qaadan waxyaabaha OS.
Dhab ahaantii waxa i joojinayay, waqtigii aan u huray, waxaan ku sigtay inaan bilaabo tijaabinta qaanso, laakiin berri waxaan ballan la leeyahay inaan shaqo arko.
Ma aanan aqoon sida loo soo xigto faallada.
haha ha walwalin, waan hagaajiyay 😀
Waad ku mahadsantahay ka tagista shakigeyga oo fadhiid ah, Ka walwalsho Nidaamka Howlgalka aad ku mashquulsan tahay ee aadan gadaasha dambe ka leexan.
Munaasabad kale, raadso tusaale kale si aad ugu dhex gasho waxyaabaha dadka kale
Ninyahow uma baahnid inaad dabeecadaas leedahay. Sikastaba waan sharaxi doonaa: GRUB wax shaqo ah kuma lahan soo galitaanka aad rabto. Si aad u doorato MATE, Cinnamon ama Gnome Shell, waa inaad ku doorataa shaashadda galitaanka, taas oo ah, Maamulaha Kalfadhiga, oo kiiskaagu noqon lahaa GDM3.
Midnimada OpenSUSE? Maya
Lamaane Firefox News ah oo xaqiiqdii mudan in la daawado